Rivo-doza Myanmar 2008 · Global Voices teny Malagasy
Rivo-doza Myanmar 2008
Voadika ny 24 Jolay 2019 6:17 GMT
(Marihana fa efa tamin'ny taona 2008 ny lahatsoratra teny Anglisy)
Namely an'i Myanmar (Burma) tamin'ny fiandohan'ny volana Mey ny rivo-doza nahafatesana olona, izay namoizana aina marobe sy fahasimban'ny tontolo iainana. Nilatsaka ny adihevitra iraisam-pirenena taorian'ny fandavan'ny fitondrana miaramila sy ny fahatarana tamin'ny famelana ireo mpiasa mpamonjy voina sy mpanao gazety hiditra ao amin'ny firenena na any amin'ny faritra niharan'ny loza, izay ahiahian'ny Firenena Mikambana fa mety ho olona an-tapitrisany no mila fanampiana maika.
Hita fa lasa fitaovana manan-danja ho an'ny fitantarana ny krizy ny Twitter. Araho ny Vaovao momba an'i Myanmar amin'ny Twitter avy amin'ny Global Voices. Jereo ihany koa ny MBS feed mahafinaritra.
Mong Palatino.no tonian-dhatsoratry Global Voices Azia Atsimo-atsinanana.
Lahatsoratra Global Voices
Sep 29 – Myanmar: Mbola mila fanampiana
May 16 – Myanmar: Lahatsarin'ny olon-tsotra taorian'ny rivo-doza Nargis
May 14 – Myanmar: Feo amin'ny alalan'ny sioka
May 14 – Myanmar: Misioka ny loza nateraky ny rivo-doza
May 11 – Myanmar: Ireo tafavoaka velona tamin'ny rivo-doza Nargis
May 08 – Myanmar: Asa fanampiana miadana
May 06 – Myanmar: Fahavoazana nateraky ny rivo-doza tsy mbola nisy toy izany
May 05 – Myanmar: Ny tafio-drivotra lafatra
Eo an-dalam-pivoarana ity pejy ity; hanampy rohy bebe kokoa izahay avy eo.
Google Earth raha handrakitra an-tsarintany ny angon-drakitry ny rivo-doza tao Myanmar
Manana sarintany ifarimbonana momba ny fandalovan'ny rivo-doza nanerena an'i Myanmar ny Associated Press.
Lahatsary mampihoro-koditra mampiseho olona am-polony maro maty tao anatin'ny rivo-doza, ato. Nametraka ity tafatafa tamin'ny lahatsary ity niaraka tamin'ny sisa velona iray tao amin'ny YouTube (via Birma News) ny Al Jazeera.
Avy amin'i Salai Thang ireo sary eo ambony, tsy fantatra ny toerana misy ny sary.
Sary ao amin'ny Flickr, ahitana ny fahavoazana ao Yangon, avy amin'i Luis Rene, sy disasteremergencycommittee. Marobe ireo olona nampiditra sary tao amin'ny Picasa, anisan'izany i MaungHla, Nay Linn, cyclonerelief, Salai Thang.
Ato ireo sary avy amin'ireo mpiasa mpamonjy voina tamin'ny rivo-doza. Manana bilaogy sy sary ihany koa ny Manampy ho an'ny Taranaka vaovao sy ny Klioba mpanome rà RAVEN.
Marobe ireo tranonkala manao fanomezana antserasera, ka anisan'izany ny:
Google: Myanmar Cyclone
Bilaogy Heart Station mitanisa ireo anarana, adiresy sy tranonkala misy ireo fifandraisana samihafa marobe mandray fanomezana ho an'ny ezaka fanavotana.
Fitantarana manokana hafa
Pejy fitantarana manokana ataon'ny Global Voices tamin'ny Fihetsiketsehana Birmana 2007.